Maraykanka, 01 October 2017
Axad 1 October 2017
Tillerson: Kuuriyada Waqooyi Wadahadal Ayaan La Yeelanay
Dawladda Maraykanka ayaa sheegtay inay si toos ah wadahadal ula yeelatay dawladda Kuuriyada Waqooyi, wadahadalkan ayaa ku saabsanaa arrimaha nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi, hase ahaatee dawladda Maraykanka ayaa sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay u muuqato mid aan dank a lahayn wadahadalka.
Trump oo ammaanay qorshaha isbeddelka canshuurta Mareykanka
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in qorshaha isbeddelka loogu sameynayo canshuurta Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga ay soo bandhigeen uu yahay naxariis u timid dadka dabaqadda dhexe.
Warbixin Ka Hadlaysa Nolosha Magaalada New York
Magaalada New York waa magaalada ugu dadka badan Maraykanka waxa ku nool dad ka badan sideed million iyo badh, waa magalada ganacsiga aduunka oo dhan ku salaysan yahay isla markaana uu ku yaallo suuqa safirka lacagaha aduunku ku xidhan yahay.
Mattis: Mareykanka kama tanaasuli doono Afghanistan
Booqasho uu maanta ku tagey magaalada Kabul, ayaa xoghayaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis wuxuu ka sheegay in Mareykanka uusan gacmaha ka taagan doonin dagaalka Afghanistan.
Kheyre oo la hadlay Soomaalida Mareykanka
Ra'iuslwasaara Xukumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyrre ayaa xalay gobolka Virginia kula kulmay qaar ka mid ah Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka.
Aqalka Cad: Dagaal Kuma Nihin K.Waqooyi
Dowlada Mareykanka ayaa sheegtay in aysan dagaal kula jirin xukumadda Pyongyang ee Kuuriyada Waqooyi.
Dimoqraadiga oo Riixaya Badbaadaba Carruurta DACA
Mudanayaasha Aqalka Congress-ka Mareykanka u matala xisbiga Dimoqraadiga ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo xaliyo kiiska 8 boqol oo kun oo ruux oo iyaga carruur ah si sharci darra ah lagu keenay Mareykanka.
Trump oo Ballaariyay Amarki uu Mareykanka Uga Mamnuucay Dalal ay Soomaaliya Ku Jirto
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ballaariyay amarki uu dalkiisa uga mamnuucay in ay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mid ah dalalka Islaamka, isaga oo hadda ka dhigay sideed wadan.
Diyaaraha Maraykanka oo Dulmaray meel Dhow K. Waqooyi
Diyaaradaha dagaalka ee bamka xambaara ee Maraykanka ayaa u dhawaaday oo dulmaray meel u dhow xeebaha bari ee Kuuriyada Waqooyi.
Fatahaado Ka Bilowday Peurto Rico
Saraakiisha maamulka Puerto Rico ayaa ka bilaabay qeybta galbeed ee jaziirada daad gureyn ay dadka uga daadgureynayaan basas, kadib marki ay khubarada saadaasha hawada ka digeen halis kasoo socota biya xireen weyn oo bilaabay fatahaad.
K.Waqooyi oo Ku Hanjabtay Tijaabinta Gantaal Kale
Kuuriyada Waqooyi ayaa muujisay inay maanta oo Jimcaha ku tijaabin doonto gantaal kale oo hydrogen bom ah badda Basifika.
Duufaanta Maria oo Korontada Ka Jartay Puerto Rico